Mid ka mid ah markii aan la soo celin karaa inaad soo amaahato lacag ah, soo jiidashada of xoojinta deynta
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Mid ka mid ah markii aan la soo celin karaa inaad soo amaahato lacag ah, soo jiidashada of xoojinta deynta
Waa "xoojinta deynta" waxaa badanaa loo arkaa xataa CM dhawaan, laakiin laga yaabo in dadka qaar ka mid ah in aadan aqoon isnt haddii ay jirto sahlanaato wax.
Tani, halka adeeg kalsoonaan kartaa for dayn badan, in loo hayo si adag u xusuuso sida loo isticmaalo, waa maxay waxaa sidoo kale waa wax macquul ah in riddoobay in ay nolosha asalka ah.
Halkan waxaa ku jira iyo muuqaalada loogu talagalay xoojinta deynta.
waa xoojinta deynta iyo
deynta xoojinta, sida maaliyadda iyo macaamiisha bangiga, waa adeeg ka mid ah shirkad dhaqaale isugu lacagtii deyn buu igu ahaa ka deyn badan in hal shirkad.
go'aansaday a deyn cusub, by mid ka mid ah bixinta, noqon sahlanaato in la maareeyo laga yaabaa, xiisaha la isugu keeno, waxaa jira faa'iido ama Yaraynta bixinta ee wadarta ah.
xoojinta deynta inta badan waa, waa mid ka mid ah hab si ay u caawiyaan dadka aan lagu samayn karaa bixinta ee deymaha badan sida.
si kastaba ha ahaatee, iyo dadka aan haysan si ay qaar ka mid ah xadka dakhliga taxan, haddii aad saxiixay oo isku xigta si ay shirkado kale, waxaa sidoo kale waa kiis in diidi lahaa dib u eegista ah ee masraxa.
ma amaahashada kaliya ee dheeraad ah, waa in fikirka fiican ee sida kooban inta badan ee bixinta.
Adeeggani waa asal ahaan waxa la macaamilooday in bangiyada waaweyn sida.
, si kastaba ha ahaatee, waxa ay leedahay sannadihii la soo dhaafay fuliyay sida wax soo saarka cusub oo adag sida Machikin iyo credit ururada hooyada. Inkastoo dulsaarka
mid kasta gooni ahaantiis, Nakaniwa, sababtoo ah waxaa sidoo kale waa meel in uu noqday xaddi weyn oo dulsaarka ah ee gargaarka si ay u bixinta ee u gaar ah, haddii aad ka fikirayso xoojinta deynta, sida aad la baaro qaar ka mid ah adeeg ee ha.
mid ah faa'iidooyinka xoojinta deynta, waa in ay isu keenay taariikhda bixinta mid ka mid ah waa weyn. Oo mid kasta oo dhamaadka
oo bishii in aad bixiso, degdegga, 35 maalmood, in kiiska ka duwan shirkad kasta amaahatay, si ay u noqdaan taariikhda bixinta oo kala duwan, ma ah qaladaad dhowr ah, sida halmaamay qasdin.
sidoo kale si loo baabi'iyo walwal ah ka hor sida ku sugan taariikhda bixinta, la qorsheeyay inay awoodaan inay bixiyaan, waxaad tidhaahdaan, waxaa wanaagsan in la isticmaalo xoojinta deynta ah.
Waxa kale oo suuragal ah in lacagta bixinta kama dambaysta ah waa la dhimay.
Tani waa sababta, in ay dhacdo qorsheyaasha bixinta kala duwan shirkad kasta, sababta oo ah qadarka maamulaha in sooco, qaddarka bixinta waa ka duwan yahay. Ma doonaysaa in la joojiyo lacagaha ee muddo gaaban
, waxa fiican in aad doorato xitaa qofka xoojinta deynta, kuwaas oo si maleeyo.
ka badan wax kasta oo kale, waa in ay lagama maarmaan ma aha in aad bixiso dulsaar dheeraad ah, waxaad tidhaahdaan, Waxaad kaalmooyinka muhiim ah marka la eego caching.
Tani waa, kuwa ay qabanayaan bixinta ee kala duwan oo ka mid ah shirkada, tan iyo markii ay suurto gal tahay in ay ka gudbaan barta at taas oo waxa uu noqonayaa qadar aad u weyn oo lacag ah oo kaliya danta bil kasta, waxaan sidoo kale keeni xawaaraha in bixinta kordhay.
dhibic marayo baaritaanka
Sidaas, waxaa jira tiro ka mid ah faa'iidooyinka dayn badan, laakiin waa xoojinta deynta, aad ma awoodi doonaan in ay isticmaalaan in ay dhex maraan in baaritaan koorsada. Sidoo kale waxay ku xiran tahay codsiga caga
ah, laakiinse aan soo xusuusan waxa ay noqon doontaa muhiim ah marka la eego dhibcood, sida waxa soo socda waxaa la soo maray iyada oo inta badan baaritaanka. Waxaa la amaahashada tirada guud ee ku
? shirkadaha kale. Sida
5 ama in ka badan shirkadaha, iyo sidoo kale marar badan deyn, waxaa sidoo kale waa khatar credit in waxaa ka maqnaan doona. Oo
? Waayo shirkad kasta oo amaahda ka qaadato amaahda ah by
10 Man, ka badan qaadato deyn at 500,000 oo unug, waxaa laga odhan doonaa inay yimaadaan kooxda aragti duwan deymin.
? taariikhda shil ah joogitaanka ama maqnaanshaha
inta badan, haddii ay jiraan jirin dib u dhac ku bixinta, sida danbaysay aan ku-bixinta aan yeelan doonaan in ay sameeyaan. naftaada
markii baadhaya in ama aan jiro shil taariikhda waa, waa fikrad wanaagsan inaad u bixisaan, iyo dheeraad ah macluumaad hay'adaha macluumaad credit shakhsi. Length of sano adeegga
ah ? shirkadda maxaa yeelay waxa ay sidoo kale waa waayo-aragnimo tirada maalmood sida xubin ka mid ah bulshada, waxaa la arki doonaa in qayb ka mid ah xasiloonida for shaqada.
xataa kasbadeen badan in muddo gaaban waqti xitaa haddii, laga yaabee wadada sahlan waa ka fiican in uu jiro dakhli go'an bil kasta.
borrowings ah xoojinta deynta jira shirkado badan oo la soo amaahday si fog, doonaa wada in mid ka mid ah shirkadda, waxaa loogu tala galay in mid ka mid ah bixinta. dulsaarka
waa yar yahay la ilaa hadda, waxaa jira mudnaan ah danta sida u dhigan marka la barbar dhigo.
markaad codsanayso xoojinta deynta, sida amaahashada wadarta tirada iyo shil taariikhda, waxa muhiim ah in la ogaado haddii ay jiraan wax dhibaato ah oo warbixin credit ah.
xataa sida xaaladaha inta badan shirkada wanaagsan, haddii ay jiraan wax deyn deymin lacagta, waxaa cad in halka ay xitaa ma ii ruxay madaxa vertical. In taariikhda bixinta ee la soo dhaafay iyo
u gaar ah, ka dib markii la tixgelinayo shuruudaha, sida dhererka adeegga, Isku day in aad la tashato, waayo, xoojinta deynta. Haddii
la xiriira / hadda amaahato lacag